Fosil wuxuu ku soo bandhigayaa Dhar cusub oo Smart OS ah IFA 2019 | Wararka Gadget
Fosil wuxuu ku soo bandhigayaa smartwatches cusub Wear OS at IFA 2019
Eder Esteban | | qalabka, Smartwatch
Fosil waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan dhinaca saacadaha casriga ah. Waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo cadaalad ah oo leh Wear OS, taas oo hadda sii kordheysa munaasabadda IFA 2019. Calaamadda ayaa dhowaan naga tagtay la soco Puma, la soo bandhigay maalintii ugu horreysay ee IFA. Hadda waxay nooga tagayaan moodello cusub oo iyaga u gaar ah oo ku jira xaddiga ay ku sugan yihiin.
Xaaladaha oo dhan waxaan ka helnaa saacado adeegsada Wear OS oo ah nidaamka hawlgalka. Fosil waa mid ka mid ah noocyada sida aadka u dhiirrigeliya ee ugu sharad badan nidaamka hawlgalka Google ee saacadaha. Marka lagu daro qaabka Puma, waxay nooga tagayaan laba saacadood oo cusub xiisaha leh.
1 Qarnigii shanaad fosil
2 MK Helitaanka Lexington 2
Qarnigii shanaad fosil
Shirkaddu waxay naga tagaysaa dhinac dhinac jiilka shanaad ee saacaddeeda. Waxaan helnaa smartwatch kaas oo la socda qaab batari dheeri ah, kaas oo noo oggolaan doona kordhiyo muddadiisa ugu badnaan, sidaas awgeed waxaan awood u yeelan karnaa inaan sii wadno isticmaalkeeda dhowr maalmood xitaa haddii aanaan lacag ka qaadi karin.
Shaashadda saacaddan foosafiga ah cabirkeedu waa 1,3 inji. Sidii caadiga ahayd, shaashad taabasho ah, oo adeegsata naqshadda cusub ee 'Wear OS design', sidaa darteed marinku waa mid aad u fudud arrintan. Awoodda keydinta ayaa labanlaabantay jiilkan cusub iyo shanaad ee sumadda. Intaa waxaa dheer, lacag la'aanta wireless ayaa lagu soo bandhigay dhexdeeda, taas oo ah sheeko kale oo xiiso u leh dadka isticmaala. Waxay leedahay sameecad noo oggolaan doonta inaan wicitaanno ama ka jawaabno.
Sida caadada u ahayd saacadaha fooshka, suunka waa la is weydaarsan karaa. Waxaan helnaa noocyo kala duwan oo xarig ah oo aan kala dooran karno, iyo sidoo kale qalab badan, laga soo bilaabo suumanka maqaarka illaa kuwa silikoonka ah. Saacaddan ayaa hadda laga iibsan karaa bogga rasmiga ah ee shirkadda qiimahiisu waa $ 295.
MK Helitaanka Lexington 2
Qaabka kale ee ku jira xadka Fosil laga bilaabo gudaha magaca Michael Kors. Waxay nooga tegayaan saacad loogu talagalay birta birta ah, taas oo soo bandhigaysa naqshad casri ah, taas oo shaki la’aan xiiso u leh isticmaaleyaal badan, maaddaama loo soo bandhigay ikhtiyaar ahaan loo adeegsado xaaladaha maalinlaha ah ama in la gashado suudh.
Runtu waxay tahay inay naga tagayso dhawr hawlood oo cusub, oo la mid ah kuwa saacadda kale. Badanaa waxay ku taal berrinka durbaannada halkaas oo aan ka heli karno isbeddelo badan oo ku saabsan saacaddan Fosil. Waxay la timid afar qaab batteri kiiskan.
Kordhiyey Batariga Mode kaas oo kuu ogolaanaya inaad isticmaasho saacada dhowr maalmood, laakiin kaliya shaqooyinka aasaasiga ah.
Daily Mode waxay siinaysaa marin u helida shaqooyinka badankood waxayna daaha ka qaadi doonaan shaashadda.
Habka caadada ah ama Habka Qaaska ah ee u oggolaanaya suurtagalnimada hagaajinta isticmaalka howlaha baahiyahaaga.
Habka Waqti-Kaliya ayaa tusi doona kaliya waqtiga shaashadda, sida saacad caadi ah.
Intaas waxaa sii dheer, sida daawashada foosafiga, waxay leedahay afhayeen noo ogolaanaya inaan ka jawaabno wicitaanada waqti kasta. Saacaddan ayaa durba laga bilaabay bogga rasmiga ah ee sumadda qiimo ah $ 350 qiimaha. Waxaa laga iibsan karaa dahab, qalin, dahab kor u kacay ama midabbo laba midab leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Smartwatch » Fosil wuxuu ku soo bandhigayaa smartwatches cusub Wear OS at IFA 2019
Qalabka Qalabka Isku Xidhan ayaa noo oggolaanaya inaan isku xirno dhammaan aaladaha Ring
Tamarta Sistema waxay soo bandhigeysaa Smart Speaker Wake Up, oo ku hadla digniinta leh Alexa